Chii chinonzi Amazon Kubhadhara uye chinoshanda sei? | ECommerce nhau
Chii chinonzi Amazon Kubhadhara uye chinoshanda sei?
Encarni Arcoya | | Nzira dzokubhadhara, Zvekutengeserana zvemagariro
Amazon Kubhadhara, kana zviri nani kuzivikanwa iye zvino seAmazon Pay, ndeimwe yemapuratifomu ekubhadhara pamhepo pasina mubvunzo anokwikwidza PayPal. Inoshandiswa zvakanyanya muAmerica, asi kwete zvakanyanya muEurope, zvirinani kusvika zvino.
Asi, Chii chinonzi Amazon Kubhadhara? Kwakachengeteka here? Ndezvipi zvakanaka zvaunogona kutipa? Zvese izvo uye zvimwe zvakawanda ndizvo zvaticha taura nezvazvo zvinotevera kuti iwe uzive ino online chikuva zvizere.
1 Chii chinonzi Amazon Kubhadhara
2 Iko Kubhadhara kweAmazon kwakachengeteka here?
3 Zvakanakira nekuipira
3.1 Makomborero kana iwe uri mutengi
3.2 Makomborero kana iwe uri mutengesi
4 Mashandisiro anoita Amazon Kubhadhara
4.1 Maitiro ekubhadhara neAmazon Kubhadhara
5 Amazon Kubhadhara mari uye mubhadharo
Chii chinonzi Amazon Kubhadhara
Amazon Kubhadhara iri online yekubhadhara chikuva, iyo inobvumira vatengi kubhadhara kwavo kutenga vachishandisa Amazon account. Kuti ubhadhare, vatengi vanogona kushandisa kiredhiti kadhi, account yebhangi kana kungoshandisa iyo bhalansi muakaundi yako yeAmazon Payments.
Mune mamwe mazwi, vashandisi vanoshandisa ruzivo rwakatochengetwa mumaakaundi ako eAmazon, kuti upinde mukati uye ubhadhare ipapo ipapo pamapeji ese ewebhu anogamuchira iyi chikuva chekubhadhara. Vashandisi vanogona kuona chimiro chemubhadharo kana kuburitsa izere kana chikamu kudzoreredza, nekungodzvanya pane iyo Amazon Kubhadhara bhatani iri pazasi pekutenga kwako.
Amazon Kubhadhara kunoisa mari muaccount yekubhadhara mangoti mutengi wevatengi paanopfuura napo. Panguva ino zvakakosha kutaura kuti mari inochengetwa muaccount kusvika mazuva gumi nemana gare gare senzvimbo uye mushure menguva iyoyo, mari dzinogona kuendeswa kubhangi account kana kuAmazon kadhi rechipo.
Iko Kubhadhara kweAmazon kwakachengeteka here?
Paunenge uchishandisa a online yekubhadhara chikuva, Kusava nechokwadi kunogona kukurwisa, kunyanya mune yekubhadhara kwakakosha. Imwe yeaya mapuratifomu ane ekuchengetedza masystem anoita kuti awedzere kana kushomeka kuchengetedzeka. Asi, pasina kupokana, iyo yakasimba poindi yeAmazon Kubhadhara ndeyekuti inodzivirira mushandisi data. Sei? Zvakanaka, nekuti iwe unogona kutenga muzvitoro zvepamhepo izvo zvisina hukama neAmazon pasina kupa yako yega data kana kuda kunyoresa kana uchitenga.
Mune mamwe mazwi, Amazon ichadzivirira hunhu hwako uye iro bhizinesi repamhepo (eCommerce) rinongoziva nezvako iyo account iyo inopihwa kubhadhara. Asi iyi haizove account yekubhangi kana kiredhiti kadhi. Iyo email ichaita, sezvazviri kutoitika muPayPal, chete izvo, mune ino kesi, isu tiri kutaura nezve email iyo yatakanyoresa nayo neAmazon.
Saka, Amazon inova muyananisi pakutenga online kuona kuti mutengano unoitwa nemazvo uye, zvikasadaro, kukumbira.
Amazon Kubhadhara kunotevera angangoita akafanana iwo marongero sePayPal, imwe yemapuratifomu akabudirira kana zvasvika kune online kubhadhara. Nekudaro, sekune chero wavo, ine zvayakanakira nezvayakaipira.
Kazhinji, Zvakanakira Amazon Kubhadhara zvinotevera:
Iko mukana wekutenga nekukurumidza, pasina kana kuisa yako yega data, asi nenzira yekubhadhara ivo vatove mutariri wekugadzirisa zvese.
Une vimbiso yeAmazon A kusvika Z, iyo inokudzivirira kana chigadzirwa chisiri icho chawaitarisira, chakakuvara kana kuputswa, kana kuti hachina kana kutumirwa kwauri.
Tenga zvakachengeteka, nekuti haufanire kugovera ruzivo rwako kumutengesi, kana kutopa chikamu chayo.
Izvo zvinokwanisika kupa zvipo kune NGOs.
Kana zviri zvipingamupinyi, chikuru chepuratifomu iyi, pasina kupokana, kuitiswa kwayo. Uye ndezvekuti kunyangwe paine yakawanda uye yakawanda eCommerce iyo nzvimbo iyo Paypal senzira yekubhadhara, zvakafanana hazviitike nenyaya yeAmazon Payments. Izvi hazvisi muzvitoro zvakawanda zvepamhepo sezvaungade, izvo zvinotadzisa mashandisiro azvo.
Makomborero kana iwe uri mutengi
Kuchera zvishoma kudzika papuratifomu, tinogona kuwana zvakanakira vese vatengi nevatengesi. Panyaya yezvaimboitika, chimwe chezvakanyanya kunaka inyaya yekuti, semutengi, haufanire kupa chero ruzivo rwemunhu mukutenga kwako. Saizvozvo, hautombofaniri kupa kero yako kuti odha yacho itumirwe, Sezvo Amazon yatove nedata iro uye ndiye achazochengeta zvese.
Uye zvakare, iwe une 90-mazuva ekudzivirira ekuda, chimwe chinhu icho, nemamwe mapuratifomu, semuenzaniso mune yePayPal, yakaderedzwa kusvika mazuva makumi matanhatu.
Makomborero kana iwe uri mutengesi
Sevatengesi, kushandisa Amazon Kubhadhara kunewo zvakwakanakira, kunyangwe ichitanga nekukanganisa kukuru. Uye ndezvekuti, nekusapa iyo data vatengi, haugone kunyoresa mutengi iyeye mune dhatabhesi rako, uye nekudaro haugone kuzviverengera nezvekusimudzira kana kunyorera nyaya (kunze kwekunge munhu iyeye abvuma kuve mavari).
Asi, pakati pezvakanaka zvezvikwata izvi, chimwe chazvo ndeye uve neruzivo rwakakosha kuti ugone kugadzira mainvoice kana kutumira. Ruzivo urwu rwunopihwa kune vatengesi kuburikidza neakaundi account yako, uye ichachengetedzwa kuitira kuti usakwanise kuishandisa zvakasununguka, asi chete nebasa rinoenderana, rinokutumira chigadzirwa chawatenga.
Kune rimwe divi, vatengesi vanozochengetedzwawo kubva kubiridzirwa, nenzira yekuti pane kuchengetedzeka kwete kwevashandi chete, asiwo kune vatengesi.
Mashandisiro anoita Amazon Kubhadhara
Vatengi vanogona kubvisa mari kubva kuAmazon Payments account chero nguva kana dzave kuwanikwa. Kubvisa mari kubva kubhangi account kazhinji kunotora mazuva mashanu kusvika kumanomwe ebhizinesi, zvichienderana nebhangi.
Izvo zvakakoshawo kutaura kuti rese rekutakura uye rekubhadhara ruzivo rwakachengetedzwa zvakachengeteka mu Amazon Kubhadhara account, saka mutengi anogona kuiwana kuti abhadhare zvinhu zvavo kana masevhisi.
Nenzira iyi, hazvidiwe kuti uve nemaakaundi akati wandei, nekuti iwe unongoda chete kusaina kuAmazon uye shandisa yako Amazon Kubhadhara account kubhadhara kunze kwekunge uchidzoreredza kadhi rechikwereti ruzivo kana rumwe ruzivo rwemunhu uye rwemari.
Parizvino, mukana wekushandisa maAmazon Kubhadhara uri mune e-commerce mapuratifomu akadai seShopify, Prestashop, Magento uye WooCommerce. Ivo vese vanoshandisa yakanangana plugin kugonesa iyi yekubhadhara system uye zviri nyore kwazvo kuisa nekushandisa, iyo inopa vatengi vepamhepo zvitoro zvimwe sarudzo.
Maitiro ekubhadhara neAmazon Kubhadhara
Kana izvo zvisati zvajeka kwauri, iwe unofanirwa kuziva izvo iyo nzira yekubhadhara muAmazon Kubhadhara inogara ichiitwa kuburikidza neAmazon (kana kubva kuAmazon Prime). Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kunyoresa uye uine nzira yekubhadhara. Sezvaunoziva, ivo chete vanogamuchirwa mune ino kadhi rebhengi, kiredhiti kadhi kana prepaid kadhi, kubvuma izvo zvakajairika, senge MasterCard, Maestro, American Express, Visa Electron, Visa ...
Paunenge uchinge uine iyo nzira yekubhadhara, unogona kuishandisa muCommerce kwavakagonesa kubhadhara neAmazon Payments kana Amazon Pay, kungave kuburikidza nekombuta, nhare kana kunyangwe kuburikidza neA Alexa uchishandisa izwi rairo.
Amazon Kubhadhara mari uye mubhadharo
Kunyangwe pasina chekubhadharisa vatengi kutenga nzira yekubhadhara iyi, iyi haisi iyo nyaya yevatengesi. Kuti vagamuchire kubhadhara kuburikidza neAmazon Payments, ivo vanofanirwa kubhadhara komisheni, yakafanana nezvinoitika mune yePayPal.
Nekudaro, iyo mitengo iri seinotevera:
Kana vari kutengeserana kwenyika, Iyo yakakamurwa muzvikamu zvishanu, zvichienderana nemari yemari. Chaicho:
Pasi pe € 2.500 inoenderana nechiyero che3.4% + € 0,35.
Kubva ku € 2.500,01 kusvika ku € 10.000 inoenderana nechiyero che2.9% + € 0,35.
Kubva ku € 10.000,01 kusvika ku € 50.000 inoenderana nechiyero che2.7% + € 0,35.
Kubva ku € 50.000,01 kusvika ku € 100.000 inoenderana nechiyero che2.4% + € 0,35.
Zvinopfuura € 100.000 zvinoenderana nechiyero che1.9% + € 0,35.
Kana vari kutengeserana kwenyika, kubhadhara kunoda imwe mari inobhadharwa inoenderana nekuti muripo unoitwa kupi, kana muEurope, Canada, Albania ... Mupfungwa iyi:
European Economic Area neSwitzerland hazvibhadhare komisheni.
Canada, Channel Islands, Isle of Man, Montenegro, United States, inobhadhara 2% Commission.
Albania, Bosnia neHerzegovina, Russian Federation Macedonia, Moldova, Serbia, Turkey, Ukraine ichave nekomisheni ye3%.
Zororo repasi rose rinotungamirirwa ne3.3% Commission.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Zvekutengeserana zvemagariro » Chii chinonzi Amazon Kubhadhara uye chinoshanda sei?
MINELA CAROLINA ESTRADA akadaro
Ini ndoda ruzivo rwekuti ndogadzira sei amazon yekubhadhara account.
Pindura kuna MINELA CAROLINA ESTRADA
Iko Amazon Kubhadhara kunowanikwa muMexico?
Pindura kuna Manuel
Edwin lopez akadaro
Vanogona here vatengesi muEl Salvador, Central America kushandisa iyi yekubhadhara sevhisi?
Pindura Edwin López
Chii chinonzi masimba echiremera uye ungachigadzirisa sei?
Iwo mashanu anozivikanwa epamhepo ekubhadhara mapuratifomu